-Emeri nnukwu na Starmania mgbe i nwere ọtụtụ nde kpakpando na-eche gị na-akpa ogho. A na-eju oghere igwe nwere yi na radiant isiokwu nke kpakpando ga-eme ka ị daa na ịhụnanya na ya. Anyị nwere ike na nrọ nke na-eru kpakpando, ma egwuregwu a na-ewetara ha unu, on your meziri naanị on Top oghere. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ mma nke mbara igwe n'abalị, mgbe ahụ egwuregwu a na-dịịrị gị. Ọ bụghị nanị na ndị na ndịna-emeputa nke a egwuregwu mara mma, ọ na-nwere a elu nloghachi ọnụego nke ihe karịrị 95%!
Ọ bụrụ na ị na-eche gị chioma bụ gị amara, mgbe ahụ na-agbalị ya na site spinning ebe a! Ebe nzọ gị dị ka gị ego ka gị uba ekwu maka onwe ya. Mgbe ị na-a Nchikota atọ ma ọ bụ karịa kpakpando, ọ bụ a mmeri. Ma nke ahụ bụ nanị ihe ndị bụ isi merie. na nke a 5 reels and 3 edoghi game, gị uba dị n'aka 6 radiant kpakpando. Ma, ọ bụ wilds na chụsasịa ndị nwere ihe ndị ka mma na-echere ihe ị.
Kpakpando na-ekpughe gị ezi uba na Starmania!
A ọkpụkpọ nwere ike nzọ ọ bụla si na 0.10 to 20.00 Ebe e si nweta. na 10 paylines na niile, na winnings na-ahụta ma ụzọ - ekpe gaa n'aka nri ma ikike ekpe. Jackpot bụ mgbe 5 big red kpakpando ndị na oghere na a na-emeri Nchikota, -enye a whooping 500 ugboro nke nzọ. Ọbụna mgbe na, na ihe ọkpụkpọ nwere ike ịhọrọ agba chaa chaa na mmeri.
Unu ga-amarakwa gị kechioma kpakpando ebe a!
The ọhịa akara na-egosi na-esi anwụde 2, 3 and 4 naanị, na pụrụ ịnọchi anya kpakpando nile ma e wezụga ikposa akara. The ikposa akara bụ nnọọ uru nnọchianya nke egwuregwu. Na ihe dị ka 200 n'oge nzọ gị na-emeri, ọ na-na-ewepụta 10 free spins. Na nke ọ bụla free atụ ogho, e nwere anụ ọhịa nke na-so ha gaa. Na a nutshell, akporo iji merie akamba-akawanye nanị elu.
Ọ na-aha ya bụ Star-gabigara ókè maka a mere! Raara nye niile ịgba chaa chaa-maniacs, egwuregwu a bụ otu n'ime ndị ole na ole oghere igwe na-akwụghachi nnọọ ụgwọ. Mfe igwu egwu ma na-aghọta, e nwere ndị mba mgbagwoju anya bonus agba na onye a. The isiokwu bụ ihe pụrụ iche na anya-akụta, ọ dịghị ikwere na ntụrụndụ, na egwuregwu ga na-ahapụ ka baa ọgaranya mgbe ha kwụsịrị ịtụ ogho on Starmania!